हाम्रोगाईघाट . ब्लगस्पोट . कम: खोरबाट मुक्त भए जमानसिंह
खोरबाट मुक्त भए जमानसिंह
9:49 PM भुवन राउत
वाइतुङ(उदयपुर) — डेढ दशकयता सुगुर जस्तै खोरमा थुनिएका सिद्धिपुर —४ वाइतुङका ३६ बर्षीय जमानसिंह अधिकारी दुई दिनयता मुक्त भएका छन । राजधानी काठमाण्डौ स्थित एक सामाजीक संस्थाले उपचारकालागी उद्धार गरेपछि सोमबार उनी खोरबाट मुक्त भएका हुन । मेरीनोल नेपाल, आशा दिपका दुई उद्धारकर्मीले अधिकारीलाई खोरबाट उद्धार गरेका छन ।
मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि उपचार गर्न नसक्दा डेढ दशकदेखि खोरमा थुनिएका उदयपुरको सिद्धिपुर- ४
जमानसिंह थापालाई खोरबाट बाहिर निकाल्दै मेरीनोल नेपाल÷आशा दिपका समाजीक कार्यकर्ता रमेश बजगाई र मोती नेपाली । उनलाई खोरबाट मुक्त गरि निशुल्क उपचार गरी सुधारगृहमा राख्न काठमाण्डौ लगीएको छ ।
मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि आर्थीक अभावमा उपचार गर्न नसक्दा उनलाई परिवारकै सदस्यले डेढ दशकदेखि सुगुर जस्तै खोरमा थुनेर राखेका थिए । आशा दिपका रमेर बजगाई र मोती चौधरीले अधिकारीलाई थुनेको खोर भत्काएर उनलाई बाहिर निकालेका हुन । अधिकारीलाई उपचार गर्नकालागी उद्धार गरिएको बजगाई र चौधरीले वताए । उनीहरुले भने “अधिकारलाई काठमाण्डौ लगेर उपचार गरिन्छ”। आर्थीक अभावमा उपचार गर्न नसक्दा थुनेर राख्नु पर्ने परिवारको बाध्यतालाई बुझेरै अधिकारीको उद्धार गरिएको उनीहरु ले वताए । आफनो संस्थाले स्थापनाकालमा मानसिक सन्तुलन गुमाएका सर्वसाधरणलाई जेलमा थुनेको देखेर उद्धार गर्ने काम सुरु गरेको बजगाईले वताए ।
उनले भने “ अधिकारीलाईपनि जेलमा नभएपनि परिवारले बनाएको खोरमा थुनेकोले उद्धार गरिएको हो”। माजीक दृष्टिले समेत थुन्ना गर्न नपाईने अहिलेको अवस्थामा अधिकारीले १५ बर्षसम्म खोरमा थुनिनु परेको उनले वताए । अधिकारीलाई निशुल्क उपचार संगै सन्चो नहुन्जेल संस्थाकै सुधार गृहमा राखीने बजगाईले वताए । २१ बर्षको उमेरमा मानसिक सन्तुल गुमाएका अधिकारीलाई ३ बर्ष घर भित्रै बाधेर र बाकी अवधि काठले बनाइएको खोरमा थुनिएको थियो ।
आर्थीक अभावमा उपचार गराउन नसक्दा छोरालाई थुनेर राख्नु पर्ने बाध्यता भएको उनकी आमा रनमाया अधिकारीले वताउदै आएकी छन । उनी भन्छिन, “मानसिक रोगीलाई थुन्नु हुदैन भन्ने थाहा थिएन”। त्यसैंलेपनि थुनेर राखेका उनले वताइन । दुई छोराका पिता समेत भएका अधिकारी बिचमा केहि समय ठिक भएका थिए । तर फेरी मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि थुनिएको हो । थापाका १५ बर्षीय जेठो छोरा धनबहादुर अहिले एसएलसीको तयारी गर्दैछन । १३ बर्षीय कान्छो युवराज ५ कक्षामा पढछन ।
सुगुर थुन्ने खोज जस्तै चारै तिर काठले घेरेको खोरमाबाट बाहिरीदा अधिकारी मुसुक हासेका थिए । सुत्न वा पलेटि कसेर टुक्रुक बस्नु भन्द अन्य विकल्प नहुदा अधिकारीको कुजीएर बस्न बाध्य भएका थिए । त्यसैले पनि खोरबाट निस्कन पाउदा मुस्कुराएको हुन सक्ने स्थानीयले वताए । छोरोको निशुल्क उपचार हुने भएपछि मानसिक सन्तुल ठिक हुने उनका पिता बलबहादुरले वताए । उनले भने “उपचार गर्न खर्च अभाव भएकै कारण खोरमा थुनियो, आजकै दिनदेखि खोर भत्काउने छु” । सामन्य लेखपढ गर्न जान्ने थापा मानसिक सन्तुलन गुमानुभन्दा पहिले रामायण, महाभारत, कृष्णचरित्र जस्ता धार्मीक पुस्तक पढने गरेको पिता बलबहादुरले वताए ।
No Response to "खोरबाट मुक्त भए जमानसिंह"